12 အဘို့ရလဒ် one piece
ပထမဦးဆုံးအ One Piece Pirates တိုက်ပွဲများဂိမ်း grandly သင်တို့ဆီသို့ပေးအပ်နေပါသည်! သငျသညျ Kung Fu တိုက်ပွဲများအတွင်းပြိုးပြိုးပြက်ပြက် Magician နှင့်များစွာသောနာမည်ကျော်အကျွမ်းတဝင်ဇာတ်ကောင်များ၏အနှစ်သာရနှင့်ကျက်သရေမြင်ရပါလိမ့်မည်။ အဘယ်သူသည်ဆုရှင်ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း သင့်အပေါ်မူတည်ပါတယ်!
phineas နှင့် ferb cowabunga candace
Candace အလှိုင်းဖလားအနိုင်ရကူညီပါ။ ညွှန်ကြားချက်: ရွှေ့ဖို့အသုံးပြုမှုမြှား keys ကို, spacebar = လှည့်ကွက်
သငျသညျ Mort အောက်ကိုဆင်းအနေဖြင့်လက်ဖြောင့်ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျဆိုးသောလူကြမ်းအဖြစ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့ကမ္ဘာမြေကိုစလှေတျခဲ့သညျ။
တိုက်ပွဲများအနိုင်ရမည်ဟု, ဝိသေသလက္ခဏာများကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့်ဤအလှည့်-based တိုက်ပွဲများဂိမ်းထဲမှာပစ္စည်းကိုဝယ်ကြလော့။ သင်သည်သင်၏ပြိုင်ဖက် '' ဘဝမနှမြောသို့မဟုတ်သူတို့ကိုသတ်ဖြတ်ခြင်းအားဖြင့်မကောင်းသောအလမ်းကြောင်းကိုယူတော်မူမည်လော
fart ၏ wizard ကို
Fart ၏ Wizard ကိုဒီအစာရှောင်-paced, Arcade သေနတ်သမား၌သူ၏လေရန်သူများအနိုင်ယူကိုကူညီပါ။ errrr ..... ရန်သူများကို .... ဆိုးသော, အနံ့, စိုစွတ်သော guffs တစ်အလုံးအရင်းပယ်ကာကွယ်ဖို့မှော်ရောင်စုံကိရိယာချပစ်! စုဆောင်းဖို့ရတနာ, မြည်မှမှော် Gong အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အချိန်နှင့်ပူးတွဲရှိပါတယ်
အဆိုပါမာရီယိုတစ်ဦးတံခါးဝအသီးအသီးအခြားမြင်လျှင်မှသူတို့တစ်တွေနေ့စွဲအဘို့အသွားတိုင်းအချိန်သူတို့ကိုခွဲခြားရှိကြ၏, ပထမဦးဆုံး sight.Unfortunately မှာလှပတဲ့မင်းသမီးနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျဆင်းခဲ့သည်။ မာရီယိုနဲ့မင်းသမီးဒီအခမဲ့အွန်လိုင်း ar အတွက်သော့ဖွင့်ခြင်းဖြင့်အသီးအသီးအခြားဖို့တံခါးဝရကိုကူညီပါ